Taona 2015 : nanomboka ny ady amin’ny fanambadiana aloha loatra | NewsMada
Taona 2015 : nanomboka ny ady amin’ny fanambadiana aloha loatra
Par Taratra sur 06/01/2016
Nalaza tamin’ny taon-dasa ny ady amin’ny fanambadiana aloha loatra, indrindra ho an’ny ankizivavy, izay nataon’ny minisiteran’ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy.
Niantsehatra ho amin’ny fanoherana izany fampanambadiana aloha loatra ny ankizy izany avokoa ireo lohandoham-pisorona rehetra, indrindra ny olobe ao an-tanàna toy ny ampanjaka sy ny Tangalamena…
Natao izany tany Antsohihy, Ambanja, Ambilobe, Diego I sy II, Nosy Be, Morondava, Moramanga, Manakara ary Toliara. Nisy ny dinika niarahana tamin’ireo tompon’andraiki-mahefa rehetra.
Efa voafaritry ny lalàna velona eto Madagasikara fa feno 18 taona ny tanora lahy na vavy vao afaka miditra amin’ny sehatry ny fanambadiana. Tsy voahaja anefa izany, indrindra amin’ny faritra sasany, ka izany indrindra no anton’ny tolona atao.
Vokatry ny fahantran’ny ray aman-dreny sy ny fomban-drazana matetika no mahatonga ny tanora miditra aloha loatra amin’ny fanambadiana. Mitarika fatiantoka betsaka ho an’ilay ankizivavikely anefa izany noho ny toe-batany tsy mbola tena tomombana hiditra amin’izany fanambadiana sy fiterahana izany.
Anisan’ny fanavotana ireo ankizivavy tsy ho tafalatsaka amin’izany fanambadiana izany aloha loatra ny fananganana toeram-piofanana arakasa. Foibem-piofanana telo no natsangana tamin’iny taona iny.
Niarahana tamin’ny minisiteran’ny Asa sy ny fampianarana teknina ary ny fanofanana arakasa izany. Teo koa ny tohana avy amin’ny vadin’ny filoham-pirenena. Natsangana ny foibe any Toliara sy Mahajanga ary Andranofeno Atsimo.